Wasiirka Duulista oo kormeeray Shaqaale lagu tababarayo Dugsiga Saadaasha Hawada “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka Duulista oo kormeeray Shaqaale lagu tababarayo Dugsiga Saadaasha Hawada “SAWIRRO”
Shaqaalaha tababarka qaadanaya ayaa ka koobnaa 16, iyadoo 7 ka mid ay ahaayeen shaqaalihii ka howgeli jiray Hay’adda Duulista Hawada xiligii Dowladdii dhaxe carruurta ay dhaleen, kuwaas oo ka baxay Jaamacadaha Dalka, waxaana maanta kormeer howleed ku tegay dugsiga tababarka shaqalaha Wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar kaasi oo ku saabsan qaabka loo sugayo amniga garoonka diyaaradaha kasoo dego kuwa ka baxa iyo raabka saaran sidii ay u heli lahaan adeegyo hufan.
Qaar ka mid ah shaqaalaha tababarka qaadanayay ayaa soo dhaweeyay waxa ayna u mahadceliyeen doorka Wasaaraddu ay ka qaadatay tababarsiintooda.
“waxyaabo badan ayaan ka faa’iidnay waxaana uga mahadcelineynaa sida Wasaaradda ay ugu howlantahay horumarinta xirfadda shaqaalaha ka howlgala Hay’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada”.
Agaasimaha Guud ee Wasaaraddda Cali Gacal Gaaboow ayaa xusay in ay soo diyaariyeen sharuucdii Maamulka Hawada uu horay u lahaa dalka ismarkaan ay ku wareejinayaa mareeyaha hay’adda.
“Waxaan diyaarinay sharuucdii maamulka hawada ee uu horay ugu shaqey jiray waagi Dowladii dhexe. waxaana ku wareejineyna Maareeyaha” ayuu yiri Agaasimaha ee Wasaaradda Duulista.
Wasiirka Wasaaradda Gadiidka iyo Duulista Hawada Mudane Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar ayaa sheegay in tababarka la siinayo shaqaalah ayaa noqonaay kii ugu horeeyey ee nuuceeda ah tan iyo 1991 bur burki Dowladdii Dhaxe dalka.
“Muhiimadda gaar ayay inoo leedahay tababar nuucaani oo kale ay helaan shaqaalaha isla markaan ay fursad inoo siineyso sida garoonka diyaaraha uu ula jaan qaadi lahaa garoomada deriska iyo kuwa caalamka waxaana garsiin doonaa dhamaan maamul goboleedyada dalka” ayuu yiri Wasiir Oomaar.
Dowlada Soomaaliya oo dhawan la soo wareegtay maamulka hawada ayaa hadda ku howlan tababaridda howlwadeenada ka shaqeeya qeybaha kala duwan ee Hay’ada Duulista iyo Saadaasha Hawada Soomaaliya
Guddiga joogtada ee Golaha shacabka oo ka hadlay qorshe howleedka kalfadhiga 4aad “SAWIRRO”
Ciidanka Amniga oo gacanta ku dhigay xubin ka tirsan Al-Shabaab